दशैं आउन १० दिन मात्रै बाकि रहेका बेला फेरी निषेधाज्ञा सुरू, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ? — Imandarmedia.com
दशैं आउन १० दिन मात्रै बाकि रहेका बेला फेरी निषेधाज्ञा सुरू, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ?
काठमाडौँ । नेपालीहरुको महान चाँड दशैँ-तिहार नजिकिदै गर्दा फेरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि बडादशैँ, तिहार, छठलगायत नजिकिँदै गरेका चाडपर्वमा भीडभाड हुन नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।